Pavel Nedvěd oo si xiiso leh kaga hadlay kulanka Juventus iyo Barcelona ee tartanka Champions League – Gool FM
Pavel Nedvěd oo si xiiso leh kaga hadlay kulanka Juventus iyo Barcelona ee tartanka Champions League
(Turin) 02 Okt 2020. Madaxweyne ku xigeenka kooxda kubadda cagta Juventus ee Pavel Nedvěd ayaa xaqiijiyay in kulanka ay la ciyaari doonaan naadiga Barcelona uu yahay mid aad u adag.
Kooxda reer Spain ee Barcelona ayaa waxa ay guruubka G la gashay Juventus, taasoo ka dhigan in Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ay isku arki doonaan tartanka Champions League xilli ciyaareedkan.
Hadalka Pavel Nedvěd ayaa wuxuu yimid kaddib markii la sameeyay isku aadka tartanka Champions League heerkiisa Group-yada, wuxuuna yiri:
“kulanka Barcelona wuxuu noqon doonaa tartan weyn, waana wax wanaagsan, sababtoo ah waxaa markale iska hor imaan doono labadooda, sida aan qabo, weli waa ciyaartoyda ugu fiican adduunka, Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi”.
“Intaas waxaa dheer, Miralem Pjanic iyo Arthur Melo ayaa is wajihi doona, waana dagaal kale oo khadka dhexe ah”.
“Dynamo Kiev sidoo kale waa koox aad u adag, oo leh tababare khibrad leh sida Mircea Lucescu, kaasoo taariikh ka sameeyay Shakhtar, marka aan ku booqano Ukraine xilliga jiilaalka waxay noqon doontaa dhibaato soo korodhay”.
“Kooxda Hungary lama garanayo, waa tartan aan caadi aheyn oo Champions League ah, laakiin anigoo ka warqaba kubadda cagta Hungary xaqiiqdii waxay lahaan doonaan tayo badan waana inaan ka taxaddarnaa dhamaan kulamada, sababtoo ah Champions League had iyo jeer koox walba waxay ku gelin kartaa xaalad adag”.
Barcelona oo guul ka soo heshay kooxda Celta Vigo oo ay booqatay… +SAWIRRO